Ciid ul Adxa – Waa Talaadada | Somaliska
Insha Allah Eid-ul-Adxa ama sida dadka Soomaalidu ugu yeeraan Ciida wayn ayaa ku beegan maalinta talaadada ah ee 16ka bisha November. Maalinta barito ah ee Isniinta ayaa ah 9ka Dulxaj oo Muslimiinta ay Soomaan ayadoo ay xujayduna taaganyihiin banka carafo. Bahda Soomaaliska ayaa idin rajeynaysa rayn rayn iyo kheyr ayadoo aan hore idiin sii leenahay Ciid wanaagsan.
Ciid ul Adxa – Waa Talaadada
Insha Allah Eid-ul-Adxa ama sida dadka Soomaalidu ugu yeeraan Ciida wayn ayaa ku beegan maalinta talaadada ah ee 16ka bisha November. Maalinta barito ah ee Isniinta ayaa ah 9ka Dulxaj oo Muslimiinta ay Soomaan ayadoo ay xujayduna taaganyihiin banka carafo.
Bahda Soomaaliska ayaa idin rajeynaysa rayn rayn iyo kheyr ayadoo aan hore idiin sii leenahay Ciid wanaagsan.
Waxay igu dhaheen ha noqon sidii kuwii hore oo kale
Labo nin oo qaxooti ah oo ku kacay arin foolxun oo xabsi iyo musaafurin lagu xukumay